May 2015 - iftineducation.com
Soomaaliya oo beenisay heshiis dakhli qeybsi.
aadan21 / May 31, 2015
iftineducation.com – Saxaafadda caalamka qaar ka mid ah ayaa ka qortay shidaalka Soomaaliya iyo heshiisyada dawaldda federaalku saxiixday. Wasaaradda Batroolka iyo Macdanta Soomaaliya ayaa beenisay wararka sheegayaya in ay ku dhowdahay heshiis ay kala gaarto shirkadda Soma Oil and Gas ee qaybsiga dakhliga shidaalka Soomaaliya. Wasiirka Batroolka iyo Macdanta, Maxamed Mukhtaar Ibraahim, ayaa nooga warramay. RIIX HALKAAN KA DAAWO MUUQAALKA
Markabkii uu dhawaan Ganacsade Cabdi Cali Faarax ugu deeqay in lagu soo daabulo qaxootiga Soomaalida ee yemen ku dhibaateysan ayaa Maanta lagu soo bandhigay Dekada Magaalada Muqdisho.
iftineducation.com – Markabka oo ah mid dad badan markiiba qaadi kara ayaa waxaa si rasmi ah loogu wareejiyay Gudiga Badbaada iyo Samato bixinta Qaxootiga Soomaaliyeed ee Dalka Yaman. Ninkaani ganacsadaha ayaa ka farxiyay Soomaali badan oo ehaladoodu ku xaniban yihiin dagaalada yeman ka socda markii uu dhawaan ku dhawaaqay inuu ku yaboohay Markabka shirkada uu madaxda ka yahay ee Jubba General…
John Kerry oo dhaawacmay iyo goobaha caafimaadka oo lagula cararay
iftineducation.com – John Kerry, Xoghayaha Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka, oo booqasho ku joogay dalka Faransiiska, ayaa waxaa la dhacay baaskiil uu watay. Xoghayaha waxaa la tilmaamay in baaskiil uu ku dhex watay dalka Faransiiska, isla-markaana uu dhaawaca ka soo gaaray baaskiilka oo la dhacay uun. Xoghayaha waxaa dhaawaciisa lagula cararay Xarunta Wadanka Switzerland ee Magaalada Geneva, si halkaasi wax loogaga qabto…
Markab lagu soo bandhigay Magaalada Muqdisho si Somalida Yemen loogu soo daabulo (Daawo Sawirada)
iftineducation.com – Xukuumadda Somaliya, ayaa waxay maanta Magaalada Muqdisho ku soo bandhigtay markab, kaasoo lagu wado in gurmad uu u sameeyo bulshada Somaliyeed, ee ku xaniban Koonfurta iyo Waqooyiga Yemen. Markabkan oo ku sugan Dekeda Muqdisho, ayaa waxaa ku socda rar raashiin, biyo iyo daawooyinba isugu jira, si loogu gurmado Somalida dalkaasi ku go’doosan. Maxamed Cabdi Xayir (Maareeye), Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta…
iftineducation.com – Diyaaradan oo la doonayo in ay ku soo wareegto dunida ayaa waxa ay guda gashay duulimaadkeedii ugu dheeraa, oo waxa ay hawada ku jiri doontaa muddo lix maalmood ah iyadoon meelna ku hakanayn. Duulimaadkan ayaa haddii lagu guulaysto waxa uu noqon doonaa midkii ugu dheeraa taariikhda ee mar qur ay sameyso diyaar ku shaqeysa ileyska qoraxda. Kaddib markii muddo…
iftineducation.com – Gabdhaha soomaalida aya aad ooga hela galmada casriga ah ee foorarka la isugu tago iyagoo u arka in ay trahay ilbaxnimo iyo reer magaalnimo in foorar la isugu tago wa sida ay ku andacoonayaan waxyna markasta ku faanaan in ay helaan nin foorar ka ama nooca eeyada oo kale ugu taga helaaan. Hadaba arintaas ayaa shaac noqtay caadi na…
Biyaha Ninka Kuwa Ugu Daran Sidey U Yaalaan IYO DUMARKA DAAWO
iftineducation.com – Biyaha Ninka Kuwa Ugu Daran Sidey U Yaalaan maxaase Badiya Manida Biyaha ninka ama Xawadu (Manidu) waa walax duuf ah oo uu ninku ku tuuro ilma-galeenka xaaskiisa kolka uu gaaro heer biyabbax. Xawadu kolka ay soo baxayso waxay leedahay midab jaalle xigeen ah oo u eg casaanka ukunta, ha yeeshee waxay dareere dhegdheg ah isu beddeshaa kolka ay hawadu…
Wasiirka Macdanta iyo Batroolka “Ma ogolaaneyno wax ka yar heshiis xalaal ah oo ku saabsan arrimaha shidaalka”
iftineducation.com – Wasaaradda Macdanta iyo Batroolka waxaa farxad u ah in ay ka warbixiso in sahanka shidaalka laga sameeyey Soomaliya uu yahay rajadiisa mid dhiira-gelin leh. Soomaliya waa mid dhaqso u soo kabsaneysa, maalgashayaashu waxa ay garwaaqsanayaan fursadaha ka jira Soomaaliya, waxaana ay Dowlada Federaalka way soo dhoweyneysaa arintaa. In laga soo kabsado colaad muddo 25 sano socotay ma han mid…
Madaxweynaha Somaliland oo booqasho ugu tegey dadka ka soo qaxay Yemen
iftineducation.com – Madaxweynaha Somaliland iyo wefdi uu hoggaaminaayo ayaa maanta oo Axad ah booqdey magaalada dekadda leh ee Berbera, si uu u dejiyo xiisadda iyo carada ka dhalatey go’aanka celinta dadka Soomaaliyeed ee ka soo barakacaya dagaalada Yemen, isla markaana u furo mashaariic horey looga hirgeliyey Berbera. Madaxweynaha oo uu garab taagan yahay guddoomiyaha gobolka Saaxil Fahmi Cabdi Bidaar ee wejigiisu…
Daawo:- Fanaada farxiya fiska Oo Dulka Ku Jiiday Somaliland jawaab Cajiib ahna Siisey.
iftineducation.com – Fanaanada Codka iyo Muuqaalka Wanaagsan Ee darxiya fiska oo Somaliland jawaab Cajiib ah Siisey fanaanada ayaa aad uga cadhootey waxa kadhacey berbera kadib hees jawaab ah usoo qaadey dadka reer hargeysa iyo maamulkooda tusisey in somali qani tahay una baahneyn HALKAAN KA DAAWO RIIX